IGrabaChat ithatha amaKhaya aPhezulu oPhezulu ngeVeki yeVeki yokuQala | Martech Zone
NgoMvulo, Aprili 11, 2011 NgeCawa, Oktobha 4, 2015 Lorraine Ibhola
NgoLwesihlanu, ndibhale iposti kwibhlog yam malunga Impelaveki yokuqalisa. Kuyo ndacebisa uninzi lwabathathi-nxaxheba ukuba babe namava atshintsha ubomi kwaye mhlawumbi:
Yiba nomsebenzi omtsha kraca
Bona loo mbono uphambeneyo oye wawukhaba ngeenxa zonke ube yinyani
Kumalungu eQela leGrabaChat liyinyani ngokuqinisekileyo. Imveliso yabo yokuwina amabhaso sisicelo sokuncokola ngoku, esinokufunda ngakumbi ngaso apha: Grabachat . Sele beqala ukuvelisa i-buzz kwaye ndiyathemba ukuba siza kuva ngakumbi malunga nabo, kunye nenye iinkampani zisungule kule mpelaveki
Siyathemba ukuba siza kuqhuba okungenani isiganeko esinye kulo nyaka. Umbuzo kuphela wokuba uza kuba ukulungele na ukutshintsha amava?
Epreli 17, 2011 ngo-1: 31 AM
Ndisandula ukufunda ibali elimnandi ngendlela ezinye zeenkokheli zentshukumo yeWebhu 2.0 ngoku ezijonga ividiyo njengemithombo yeendaba elandelayo yokoyisa. Iindleko ze-bandwidth kunye netekhnoloji ngoku zenza ukusasazwa kwevidiyo kunye nokugcinwa kwexabiso ngakumbi. Kuyonwabisa ukubona uGrabachat kwi-cusp yale.